Al Shabaab oo xoojisay go'doominta ay ku heyso Degmada Tiyeeglow iyo qaylo dhaan laga muujiyay - iftineducation.com
Al Shabaab oo xoojisay go’doominta ay ku heyso Degmada Tiyeeglow iyo qaylo dhaan laga muujiyay
iftineducation.com – Mintidiinka Ururka Al Shabaab, ayaa xoojiyay go’doominta ay ku hayaan Degmada Tiyeeglow ee Gobolka Bakool, iyadoo dhanka kalana ay taasi qaylo dhaan ka muujinayaan masuuliyiinta Dowladda ee Degmadaasi.
Shabaabka, ayaa soo buuxiyay afarta wado ee soo gasha Degmada Tiyeeglow, waxayna horey u diideen in gawaarida ganacsiga ay gudaha u galaan Degmadaasi amaba ay ka soo baxaan.
Gudoomiyaha Degmada Tiyeeglow ee Maamulka Gobolka Bakool Maxamed Cabdulle Xasan, oo ka hadlay go’doominta ay Shabaabku ku hayaan Degmadaasi, ayaa wuxuu ku sheegay in laga dareemay Degmada.
“Dadka waxay dareemeen go’doominta ay Degmada ku hayaan nabadiidka, Dowladda waxaa laga rabaa si kasta oo gargaarka ku keeni karto inay ku keento. Dadka intaan ka dib ma adkeysan karaan.” Ayuu yiri Gudoomiyaha Degmada Tiyeeglow.
“Nabadiidka afarta wado ayay jooggaan, mana noo diyaarsano ciidan ka saara wadooyinka, ee Dowladda raashiin gargaar ah hala soo gaarto dadka macluulsan.” Ayuu yiri Maxamed Cabdulle Xasan.
Dowladda Somaliya oo marar badan loogu baaqay inay wadooyin ka saarto Al Shabaab, ayaa waxaa mooddaa inay weli ka cago jiideyso, xilli dadka reer Tiyeeglow ay la kufayaan macluusha baahsan, ee la soo deristay.
Shabaabka, ayaan wax naxariis ah u samayn shacabka ku dhaqan dhulkii laga fara maroojiyay, iyadoo ay kuu muuqaneyso sida aynaan ugu diir naxayn dadka tabaaleysan.
Nasteexo indho iyo Axmed Zaki oo saaray hees iskaabulada xaraarad ku kicinaysa Daawo muuqaalka